भ्यालेन्टाइन डेमा के उपहार दिने प्रमिकालाई ? | Music Joy Media Music Joy Mediaभ्यालेन्टाइन डेमा के उपहार दिने प्रमिकालाई ? | Music Joy Media
3:52 AM | Monday, May 27, 2019
भ्यालेन्टाइन डेमा के उपहार दिने प्रमिकालाई ?
Published On :5September, 2018 11:38 pm
प्रणय दिवस यानी भ्यालेनटाइन्स डे अब केही दिनमात्र बाँकी छ । गुलाफ दिवससँगै आजबाट प्रेमको मौसमको औपचारिक शुरुवात भएको छ । यो समयमा प्रेममा हुनुहुने तपाईंले आफ्नो प्रेमिकाको लागि केही उपहार दिने पनि अवश्य सोँचिरहनु भएको होला । साथै, के उपहार दिने भनेर पनि अलमलमा परिरहनुभएको होला । हुन पनि प्रेमिकाको रुची र आफ्नो गोजी दुवैलाई सुहाउने हुनपर्यो उपहार पनि । तपाईंहरुलाई सजिलो होस् भनेर उपहारका लागि केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छः
फूलःयो सबैभन्दा सरल र सुरक्षित उपहार हो । केटीहरुलाई फूल जहिले पनि मनपर्छ । यसमा तपाईं कहिले फेल खान सक्नुहुन्न । मात्र फूल ताजा होस् भन्नेमा त्या दिनुहोस् । गुलाफ मात्र होइन लिली र अर्किडको फूल पनि भ्यालेन्टाइन्स डेमा उपहार बन्न सक्छ । यसलाई अलि रोचक बनाउन फूलभित्र रोमान्टिक सन्देश लुकाएर दिनुहोस् ।
चक्लेटःहुनतः आजभोली केटीहरु तौल बढ्ने भन्दै चकलेटबाट वर्षभरी टाढै बस्न खोजिरहेका हुन्छन् । तर, भ्यालेन्टाइन्स डेजस्तो अवसरमा चक्लेट दिँदा वर्षभर थामेको मनलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ । रमाइलो कुरा भनेको त्यसको केही भाग तपाईंले पाउनुहुनेछ ।
सुगन्धित क्यान्डलःधेरैलाई यो सुझाव मन नपर्नसक्छ । तर, सुगन्धित क्यान्डलहरुको केटीहरुमा छुट्टै असर हुन्छ, त्यसको सुगन्धले उनीहरुको मुड नै बदलिदिन्छ । अझ डेटमा जाँदा सगुन्धित क्याडल बाल्नुभयो भने त्यसले त्यहाँको वातावरण नै रोमान्टिक बनाइदिन्छ ।स्पाको भौचरकेटीहरुलाई राम्री देखिन मनपर्छ । त्यही भएर स्पा वा पार्लरकौ भौचर दिनुभयो भने उनी पक्कै खुसी हुन्छन् । उनीहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ स्पा गएर आनन्दित हुन मनपर्छ । अझ दुवैको लागि स्पाको भौचर किन्न सक्नुभयो भने त झन् मज्जा ।
छोटो यात्राःकाममा व्यस्त हुने जोडीका लागि भ्यालेन्टाइन्स डे आफ्नो प्रेमिकासँग केही समय बिताउने उपयुक्त समय हुनसक्छ । कामको व्यस्तताले लामो समयसम्म प्रेमिकासँग समय बिताउन नपाएकाहरुले शहरबाट नजिकै यात्रा गर्न सक्छन् ।
भित्री वस्त्र:फ्यान्सी लिन्जरे (भित्री वस्त्र) किनेर आफ्नो प्रमिकालाई सेक्सी अनुभव पनि गराउन सक्नुहुन्छ । तर, यो अलि महंगो हुनसक्छ ।
कस्मेटिक:केटीहरुलाई आफूसँग जति भए पनि नपुग्ने भनेको कस्मेटिक नै हो । कुनै राम्रो ब्राण्डको कस्मेटिक पनि भ्यालेन्टाइन्स डेमा राम्रो उपहार हुन सक्छ ।
खेलौना:टेड्डी बियर, बार्बी आदि खेलौनासँग केटीहरु जति उमेर भए पनि खेल्न रुचाउँछन् । खेलौना दिनुहोस्, तपार्ईंलाई उसले जीवनभर माया गर्नेछ ।
पफ्र्युम:यो चाहीँ अलि अप्ठ्यारो छ कि भने आफ्नो प्रमिकालाई कुन सुगन्ध मनपर्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर उनले पहिले प्रयोग गर्ने पफ्र्युम पत्ता लगाउनुहोस् ।
जुत्ता:केटीहरु कहिले पनि जुत्ताबाट वाक्क बन्न सक्दैनन् । उनको रुचीको बारेमा थाहा पाउनुहोस् र जुत्ता उपहार दिनुहोस् ।
लुगाःसबै केटीहरुलाई स्टाइलिस देखिन मनपर्छ । त्यही भएर लुगा पनि भ्यालेन्टाइन्स डेमा फेल नखाने अर्को उपहार हो । अथवा तपाईं छान्न अप्ठ्यारो भयो भने उनलाई मनपर्ने पसलबाट सपिङ भौचर दिनुभयो भने हुन्छ ।
ब्यागःलुगा र जुत्ताजस्तै महिलाहरुको अर्को प्रिय वस्तु भनेको ब्याग पनि हो । उनीसँग नभएको रंगको व्याग किन्नुभयो भने त्यो पनि भ्यालेन्टाइन्स डेको राम्रो उपहार हुनसक्छ ।
ज्वेलरी:पैसा हुनेहरुले महंगो ज्वेलरी दिए पनि हुन्छ । नत्र बजारमा ठिक्क मूल्य पर्ने ज्वेलरी दिए भने प्रेमिका खुसी हुनेछिन् ।
ग्याजेट:कोही प्रेमिकाहरु ग्याजेटको सौखिन हुन्छन् । उनीहरुलाई फूल वा चक्लेटभन्दा आइपड वा स्मार्टफोन गिफ्ट दिनसक्नुहुन्छ ।